Oovimba be-Bayer AG-Ilungelo laseMelika lokwazi
ezaposwa ngomhla Juni 2, 2020 by UStacy Malkan
Imibutho emine kuphela ngoku ilawula ngaphezulu kwe-60% yonikezelo lwembewu kunye neyeza lokubulala izitshabalalisi. Ukongamela uluntu ngemisebenzi yabo kubalulekile ekuboneleleni ngokutya okukhuselekileyo nokunempilo. Ukanti zonke ezi nkampani- iMonsanto / Bayer, iDowDuPont, iSyngenta, i-BASF- zinexesha elide Iimbali zokufihla ingozi iimveliso zabo. Kuba iirekhodi zabo azikhuthazi ukuthembela, baxhomekeke kumaqabane eqela lesithathu ukukhuthaza kunye nokukhusela iimveliso zabo.
Amanqaku alapha ngezantsi ayakhanya kule nethiwekhi ifihlakeleyo: amaqela angaphambili, izifundiswa, intatheli kunye nabalawuli abasebenza ngasemva kunye neenkampani zokubulala izitshabalalisi ukukhuthaza nokukhusela ii-GMO kunye nezibulala-zinambuzane.
Ulwazi esiluxela apha lusekwe kuphando lwase-US lweLungelo lokwazi olufumene amashumi amawaka amaphepha amaqumrhu angaphakathi kunye nolawulo ukusukela ngo-2015. Ngoku ka Amaxwebhu eMonsanto atyhilwe kwi-2019, Uphando luka-USRTK luza kuchaphazela yonke le shishini.
Nceda wabelane ngala maphepha, kwaye sayina apha ukufumana iindaba eziphambili kuphando lwethu.
I-AgBioChatter: apho ookopolotyeni kunye nabahlohli bacwangcise iqhinga kwi-GMOs nakwizibulali zinambuzane
UAlison Van Eenennaam: Isithethi esingaphandle kunye nommeli weemveliso zolimo kunye ne-GMO
IiNkampani zeBayer Shady PR: UHillard kunye noKethumhum PR
Ukuhlaziywa Uncedo kumzi mveliso weekhemikhali PR kunye neenzame zokuphembelela
Iziko lokuDibana kokutya ukutya kunye noshishino kwezolimo amaqabane PR
ICornell Alliance yeNzululwazi yi Iphulo lobudlelwane noluntu eCornell ukukhuthaza ii-GMO
IBhunga loLwazi lweBiotechnology, iimpendulo zeGMO, iCropLife: ushishino lwezibulali-zinambuzane amanyathelo okuqala
UDrew Kershen: icandelo lezolimo eliphambili kwiqela eliphambili
Uguquko lokutya lweGMO Yifilimu elahlekisayo esasaza ubuxoki, batsho abafundi abaninzi
UGeoffrey Kabat: ubudlelwane kumaqela ecuba kunye neekhemikhali
Glyphosate Spin Jonga: ukulandelela amabango malunga neyeza elisetyenziswa kakhulu
Iimpendulo zeGMO yi Ulawulo lobunzima Isixhobo se-PR se-GMO kunye neyeza lokubulala izitshabalalisi
UHank Campbell maze yeebhloko zesayensi ezithanda iMonsanto
UHenry I. Miller yehliswe yiForbes yeMonsanto ye-scandal
IQonga laBasetyhini abaMeleyo: Iqela elixhaswa ngemali nguKoch likhusela i-pesticide, ioyile, amashishini ecuba
IBhunga leLizwe loLwazi ngezoKutya (IFIC): Indlela eziKhulu zokutya ezijikeleza ngayo iindaba ezimbi
IZiko lezeNzululwazi ngezoBomi leHlabathi (i-ILSI) liqela lokulungiselela ukutya kushishino, amaxwebhu abonisa
UJay Byrne: Dibana nendoda esemva komatshini weMonsanto PR
UJon Entine, iProjekthi yoLwazi lokuFunda nokuBhala: abathunywa abaphambili beMonsanto, iBayer kunye nomzi mveliso weekhemikhali
UKeith Kloor: ukuba intatheli yesayensi isebenze njani namahlakani oshishino ngasemva
UKevin Folta amabango alahlekisayo nalahlekisayo
UMark Lynas weCornell Alliance weSayensi Ukunyusa okukhohlisayo nokungachanekanga kwishishini lezolimo kwi-ajenda yorhwebo
IMonsanto ithiye la "maqabane eshishini" kuyo Isicwangciso se-PR sokujongana nomthetho womhlaza we-glyphosate (2015)
UNina Federoff yahlanganisa igunya lenzululwazi yaseMelika ukuba ibuyele eMonsanto
UPamela Ronald's ubudlelwane kumaqela angaphambili emizi-mveliso
UPeter phillips bakhe imfihlelo "ilungelo lokwazi" ungcelele kwiYunivesithi yaseSaskatchewan
SciBabe uthi yitya i-pesticides yakho, kodwa ngubani oyihlawulayo?
Iziko leMedia Media ikhuthaza iimbono ezihlangeneyo zesayensi
Ingqondo malunga neSayensi / STATS jikelezisa isayensi kwimizi-mveliso
Stuart Smyth's ubudlelwane kwezolimo kunye nenkxaso mali
UTamar Haspel ilahlekisa abafundi beWashington Post kwiikholamu zayo zokutya
Ixabiso leZipho: I-BIO VP yangaphambili yayiyeyona ntsebenzo iphambili kushishino lwezolimo
Amanqaku angakumbi malunga namaqela aphambili aphambili, amaqela orhwebo kunye nababhali be-PR
I-BIO: iqela lezorhwebo le-biotech
IZiko lezeNzululwazi ngezoBomi leHlabathi
I-Kavin Senapathy / MAM Iintsomi
Ezinye izixhobo ezivela e-US Right to Know
Izifundo zezifundo ezibhalwe ngokubhaliweyo yi-US ilungelo lokwazi
Amaphepha eMonsanto: Uxwebhu lweRoundup / iGlyphosate
Ugcino lwamaxwebhu eDicamba
I-Roundup kunye ne-Dicamba Trial Tracker Ibhlog entsha ihlaziywa rhoqo
Iphepha lenyaniso leGlyphosate: Ukuxhalaba kwezempilo malunga nePesticide esetyenziswa kakhulu
Uxwebhu lwenyani lweDicamba
Iindaba zeendaba zehlabathi jikelele Ilungelo laseMelika lokwazi iziphumo
Ukuba uyawuthanda umsebenzi wethu, nceda YENZA LONTO ukusinceda sinyuse ubushushu kuphando lwe-USRTK.
Ukutya kwengqondo, GMO, Uphando lwethu, Pesticides Uphengululo lwezifundo, UAlison Van Eenennaam, Ibhunga laseMelika lezeNzululwazi kunye neMpilo, Bayer AG, Ukuhlaziywa, Iziko lokuDibana kokutya, ICornell Alliance yeNzululwazi, UDrew Kershen, UmfundiHillard, IProjekthi yokuFunda ngokuBhala, UGeoffrey Kabat, Iimpendulo zeGMO, Hank ikampu, Henry Miller, IFIC, IQonga laBasetyhini abaMeleyo, IMF, UJon Entine, Ketchum PR, UKevin Folta, UMark Lynas, IMonsanto, Sci Babe, Ingqondo malunga neNzululwazi, STATS, UTamar Haspel, Ixabiso leZipho
Iintsalela Zokubulala Ukhula Ezifumaneka Kwiipesenti ezingama-98 zeesampulu zobusi zaseCanada
ezaposwa ngomhla Matshi 22, 2019 by USusan Lang
Uphononongo bubungqina bamva nje bokuba i-glyphosate herbicides igcwele kakhulu kangangokuba iintsalela zingafunyanwa kukutya okungaveliswanga ngamafama asebenzisa i-glyphosate.
Njengoko abalawuli baseMelika beqhubeka nokujuxuza kumbandela wokuvavanywa kokutya kwentsalela yababulali bokhula lwe-glyphosate, oososayensi bakarhulumente eCanada bafumene iyeza lokubulala izitshabalalisi kwiisampulu zobusi ezingama-197 ezingama-200 abazifundileyo.
Ababhali be isifundo, bonke abasebenzela iAgri-Food Laboratories eAlberta Ministry of Agriculture and Forestry, bathi ukwanda kweentsalela zeglyphosate kwiisampulu zobusi - iipesenti ezingama-98.5 - kwakuphezulu kunoko kwaxelwa kwizifundo ezininzi ezifanayo ezenziweyo kule minyaka mihlanu idlulileyo kwezinye amazwe.
IGlyphosate sesona silwanyana sibulala mhlaba sisetyenziswa kakhulu kwaye sisisixhobo esisebenzayo kwiimveliso zeRoundup kunye namanye amakhulu athengiswa kwihlabathi liphela kwezolimo nakwezinye iinjongo. Ukusetyenziswa kukhule ngokumangalisayo kule minyaka ingama-25 idlulileyo kwaye abathengi babe nexhala malunga nentsalela yokubulala ukhula ekutyeni kwabo.
Idatha ibonelela ngobungqina obutsha bokuba i-glyphosate herbicides ixhaphake kakhulu kwindalo esingqongileyo kangangokuba iintsalela zingafunyanwa nakukutya okungaveliswanga ngamafama asebenzisa i-glyphosate. Kwingxelo yabo baphonononge ukuba babalekela kulibaziseko bezama ukulinganisa izixhobo zabo zovavanyo "ngenxa yobunzima ekuhlangatyezwane nabo ekufumaneni isampulu yobusi ebingenayo i-glyphosate."
Iinyosi zichola umkhondo wokubulala izitshabalalisi njengoko zisuka kwisityalo ziyokutyala, zingenzanga ngabom zigqithisela intsalela kwizityalo okanye ukhula olufuthwe ngeglyphosate libuyele kwimingxunya yabo.
Kwisifundo esahlukileyo, abaphandi besiqithi saseHawaii iKauai bathathe ubusi ngqo kwimingxunya yeenyosi ezingama-59 kwaye bafumana iintsalela zeglyphosate kwiipesenti ezingama-27 zazo. Abaphandi baseHawaii Uthe iinyosi zenyosi ezikufutshane neendawo zokufama kunye neendawo zegalufa apho kusetyenziswa khona i-glyphosate yayinezinga eliphezulu lesibulali-zinambuzane.
Ingxelo yaseCanada iza naphakathi kobungqina obukhulayo bokuba i-glyphosate herbicides inokubangela umhlaza, ngakumbi ingeyiyo iHodgkin's lymphoma. NgoLwesibini ijaji eSan Francisco ngamxhelomnye bafunyanwa ukuba i-Roundup, i-glyphosate-based herbicide eyenziwe yathandwa ngumenzi weekhemikhali uMonsanto Co, ukusetyenziswa kwaba "yinto ebalulekileyo" ekubangeleni i-non-Hodgkin's lymphoma kwindoda yaseCalifornia. Oko kwavakalisa isigwebo esifanayo sejaji esanikezelwa ngo-Agasti kwimeko eyahlukileyo apho ixhoba lomhlaza likwatyhola ngokuba isifo sakhe sasibangelwa kukuvezwa yimichiza yokutshabalalisa ukhula esekwe kwi-glyphosate-based based Monsanto.
Zombini ezi zigwebo zeza emva kwamagqwetha abamangali bezisa ubungqina bophando oluninzi olubonisa ukubanga okubangelwa ngumhlaza kwi-glyphosate herbicides, kubandakanya epapashwe kwinyanga ephelileyo kwiphephancwadi elinomhleli osisazinzulu esiphezulu kwi-Arhente yokuKhuselwa kokusiNgqongileyo e-US (EPA).
Isigqibo sabaseKhanada sokuvavanya iisampulu zobusi kwi-glyphosate siza emva kokufanayo jonga iisampulu zobusi yi US Food and Drug Administration chemist ngo-2017. Isazinzulu se-FDA safumana zonke iisampulu zobusi ezingama-28 awayezijongile zazinomkhondo we-glyphosate, neepesenti ezingama-61 zeesampulu ezine-glyphosate eyaneleyo enokulinganiswa. Ezinye iisampulu zazinentsalela yeyeza lokutshabalalisa ukhula lincinci kakhulu ukuba lingalinganiswa.
Ingxelo yaseKhanada, epapashwe kwijenali ebizwa Izongezo zokutya kunye nezinto ezingcolileyo: Icandelo A, I-glyphosate okwangoku iyisithako esisebenzayo kwi-181 ye-herbicides ebhaliswe ukusetyenziswa eCanada kwaye ukusetyenziswa kwayo ngokubanzi kuyenze yafumaneka ngokubanzi kwindalo esingqongileyo.
Ababhali bophando bachaza ukuba iCanada, njenge-United States, ayinayo imigangatho esemthethweni yokuba ingakanani iyeza lokubulala ukhula lithathwa ngokuba likhuselekile kubusi. Abalawuli kumazwe ahlukeneyo baseta oko kubizwa ngokuba "yimida ephezulu" (MRLs) kwaye baxelele abathengi ukutya kwabo kukhuselekile ukuba intsalela yezibulali zinambuzane ihlala ingezantsi kweeMRL. EYurophu, i-MRL ye-glyphosate in ubusi yi-0.05 mg / kg, ikwabonakaliswe njenge-50 μg / kg.
Ababhali bokufunda baseCanada bathi onke amanqanaba awafumeneyo angaphantsi komda waseYurophu, nangona awona manqanaba aphezulu ayengekho nje ngaphakathi komda osemthethweni. Ngenxa yokuba intsalela ingakhange idlule kwi-MRL, bathi, "umngcipheko kwimpilo yabathengi ubonakala uphantsi ngokusekwe kwintsalela efunyenweyo."
Amanqanaba amanqanaba ashiyekileyo afunyenwe sisazinzulu se-FDA kubusi base-US ayengaphezulu kwento ebizwa ngokuba yinqanaba elikhuselekileyo elisebenza kwi-European Union. Kodwa i-FDA, njengeSebe lezoLimo lase-US (i-USDA) kunye ne-EPA, iqinisekisa ukuba okoko intsalela yokubulala izitshabalalisi ingaphantsi kwee-MRL ezisemthethweni, ayinabungozi.
Uninzi lwenzululwazi aluvumi ukuba ii-MRLs ziyakhusela impilo yoluntu, nangona kunjalo.
"Abantu bacinga ukuba imigangatho ikhusela impilo yoluntu kodwa ayisiyiyo," utshilo uGqirha Philip Landrigan, umlawuli weNkqubo yezeMpilo yoLuntu yeHlabathi kwiKholeji yaseBoston, uxelele i-EHN. "Elona xabiso lilungileyo" lentsalela yokubulala izitshabalalisi ekutyeni ngu "zero," utshilo. "Khumbula ukuba uninzi lwabantu abatya ubusi ngabantwana."
Iqela lezenzululwazi laseHarvard lipapashiwe uluvo Ngo-Okthobha echaza ukuba uphando oluthe kratya malunga nokunxibelelana okunokubakho phakathi kwezifo kunye nokusetyenziswa kweentsalela ze-pesticide "zifuneka ngokungxamisekileyo" njengoko ngaphezulu kweepesenti ezingama-90 zabemi baseMelika zinentsalela yezibulali zinambuzane kumchamo nasegazini labo.
I-United States iwele ngasemva kweYurophu, Canada kunye namanye amazwe kuvavanyo lokutya kwentsalela yeglyphosate. Nangona zombini i-FDA kunye ne-USDA zivivinya rhoqo ngonyaka iisampulu zokutya zeentsalela zamayeza okubulala izitshabalalisi kwaye zichaze idatha kwiingxelo, zombini iiarhente azibandakanyi i-glyphosate kwiinkqubo zabo zokuvavanya unyaka nonyaka.
Ngapha koko, idatha yovavanyo lobusi eqokelelwe ngusokhemisi we-FDA ayizange ipapashwe yi-FDA kwaye ayifakwanga kwidatha yovavanyo yokuqala ye-glyphosate ye-arhente eyakhutshwa ngasekupheleni konyaka ophelileyo njengenxalenye yengxelo yedatha yovavanyo yonyaka.
I-USDA ikwanjalo ngokuvavanya ukutya ukutya kweentsalela ze-glyphosate amashumi eminyaka. I-arhente icwangcise ukuqala kuvavanyo olunqunyelwe kwi-2017 kodwa ulahle isicwangciso ngenkcazo encinci kuphela iinyanga ezimbalwa ngaphambi kokuba kuvavanywe.
Ukunyanzelwa komthetho kuvavanyo
Phakathi kwazo zonke iinkxalabo malunga ne-glyphosate kunye nentsalela kukutya, i-US Rep Rosa DeLauro yase-Connecticut kule nyanga yazisa umlinganiso ebizwa ngokuba “Gcina ukutya kukhuselekile kumthetho weGlyphosate.” Umthetho osayilwayo uya kufuna ukuba i-USDA ivavanye rhoqo iisampulu zokutya kwiintsalela zeglyphosate.
Umthetho osayilwayo uya kuthintela ukutshizwa kweglyphosate njenge-desiccant kwi-oats. Isenzo siqeshwe ngamanye amafama ukomisa ioats ngaphambi kokuvuna. Kwenza isivuno sisebenze ngakumbi kodwa sishiya intsalela ephezulu kukutya okugqityiweyo nge-oat.
IMonsanto, ngoku iyunithi yeBayer AG, ithengise i-glyphosate ukuze isetyenziswe kwi-oats njenge-desiccant iminyaka, kwaye inkampani iye yaqinisekisa ngempumelelo i-EPA ukuba inyuse i-MRL yeentsalela ze-glyphosate ezivunyelwe kwimveliso ye-oat. Ngo-1993, umzekelo, i-EPA ibinonyamezelo ye-glyphosate kwii-oats kwiindawo eziyi-0.1 kwisigidi ngasinye (ppm) kodwa ngo-1996 UMonsanto ubuze i-EPA ukunyusa ukunyamezelana ukuya kwi-20 ppm kunye I-EPA yenze njengoko ibuziwe. Ngo-2008, kwisiphakamiso sikaMonsanto, I-EPA kwakhona ijonge ukuphakamisa unyamezelo ye-glyphosate kwi-oats, ngeli xesha ukuya kwi-30 ppm.
Kwibhili yakhe, uDeLauro ujonge ukusika i-MRL yeentsalela ze-glyphosate kwii-oats ukuya kwi-0.1 ppm.
Amafama aseCanada aphakathi kwabavelisi beoyile abaphambili emhlabeni, kwaye ukususwa ngeglyphosate yinto eqhelekileyo apho.
Impilo Canada iyalile inkxalabo malunga nokhuselo lwe-glyphosate, esithi: "Akukho gunya lolawulo lwezibulali zinambuzane kwihlabathi ngoku elithatha i-glyphosate njengomngcipheko womhlaza ebantwini abakumanqanaba abantu abasesichengeni ngawo ngoku."
Ukongeza kuvavanyo lwentsalela yeglyphosate, izazinzulu zaseCanada ziye zavavanya iintsalela zeglyphosate's Eyona mveliso iphambili yokuthoba isidima, iMetabolite ebizwa ngokuba yi-aminomethylphosphonic acid (AMPA). Njenge-glyphosate, i-AMPA kudala ithathwa njengenobuthi obuphantsi. I-AMPA yafunyanwa kwiisampulu eziyi-198 ezingama-200 ukuya kuthi ga kwi-50.1 μg / kg.
"Igalelo le-glyphosate kunye ne-AMPA intsalela ekhoyo kwindawo engcolileyo ekungcoleni incindi yezityalo kwaye emva koko ubusi uqobo bunzima nangakumbi ngokwahluka kwamanqanaba ezi khompawundi kwimatriki yokusingqongileyo njengomhlaba nangaphezulu kwamanzi," batsho oososayensi. ingxelo.
Izazinzulu zaye zajonga intsalela yombulali wokhula i-glufosinate kwaye zafumana intsalela yolo hlobo lokubulala iintsholongwane kwiisampulu eziyi-125 ezingama-200, olona xinzelelo luphezulu lufunyenwe luyi-33 μg / kg.
I-Glufosinate sisithako esisebenzayo kwi-BASF's Liberty herbicide.
Pesticides Bayer AG, EPA, FDA, glyphosate, IMonsanto, i-non-Hodgkin lymphoma, Yisonge yonke, Ukulawulwa kokutya kunye neziyobisi e-US, USDA